Deep Freeze ကို ဘယ်လို ပြန်ဖြုတ်မလဲ
Kyaw : DeepFreeze software ကို ဖျက်နည်းလေးတွေ သိချင်ပါတရ် သူများတကာ တွေက မိမိစက် (သို့) တဦးတယောက်ရဲ့ စက်အား DeepFreeze ကိုတင်ထားလျှင် Password မသိဘဲ ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ပြုလုပ်ရပါလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတရ် ..
Deep Freeze ရဲ့ Admin Password မေ့သွားသူများ အတွက် နည်း (၂) နည်းနဲ့ ပြန်ဖြုတ်နည်းကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ် . တစ်နည်းနဲ့ မရရင် တစ်နည်းနဲ့ လုပ်ပါ . အပေါ်ကနည်းကို မလုပ်တတ်ရင် နောက်ဆုံး တစ်နည်းနဲ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . အပေါ်နည်းနှင့် မလုပ်ဘဲ နံပါတ်(၂) နည်းကို တစ်ခါတည်း လုပ်လဲ ရပါတယ် . အဆင်ပြေသလိုလုပ်ပါ .
မိမိတင်ထားသည့် Deep Freeze ကို your uninstaller ကိုသုံးပြီး uninstall လုပ်ပါ။
urinstaller မရှိရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ .
ပြီးတာနဲ့ system restore ကို သူမသုံးခင်နေ့ကကိုပြောင်းပါ။
Unfreezer for Deep Freeze ဆိုတဲ့ program တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး ပြန်ဖြုတ်တဲ့ နည်းပါ . အဲ့ဒီ့နည်းကတော့ Admin Password မေ့သွားတဲ့ သူတွေအတွက်ကို အဆင်ပြေပါတယ် . အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:19 AM